स्मार्टफोन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
काठमाडौं । धेरै मानिसहरुलाई स्मार्टफोन किन्ने बेलामा कसरी छनोट गर्ने भन्ने कुराको समस्या हुन्छ । स्मार्टफोन खरिद गरेपछि अलि राम्रो किनेको भए हुने वा आफूले चाहेको जस्तो नभएको भन्ने गुनासो धेरैले गर्ने गर्छन् । त्यसले स्मार्टफोनको छनोटमा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ।
१. अपरेटिङ सिस्टमको छनोट
स्मार्टफोन खरिद गर्दा अपरेटिङ सिस्टममा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । सहज तरिकाले आफ्नो स्मार्टफोन चलाउन चाहने मानिसहरुका लागि आईओएस अपरेटिङ सिस्टम राम्रो हुन्छ । धेरै विकल्पहरुको खोजी गर्ने मानिसहरुको लागि एन्ड्रोइड महत्वपूर्ण हुन्छ । यसअघि चलाइरहेको अपरेटिङ सिस्टम भएको स्मार्टफोन खरिद गर्दा स्मार्टफोन चलाउन केही सहज हुन्छ ।
२. स्मार्टफोनको मूल्य
स्मार्टफोन खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा मूल्य पनि हो । बजारमा विभिन्न मूल्यको स्मार्टफोनहरु पाइन्छन् । त्यसमा आफ्नो बजेटमा पर्ने स्मार्टफोनहरुमध्ये बाट एउटा छनोट गर्नाले स्मार्टफोनको छनोटमा केही सहयोग पुग्छ ।
३. स्मार्टफोनको आकार
यदि स्मार्टफोनको प्रयोग आफूले मात्र गर्ने हो भने ५.५ इन्चको वा सोभन्दा सानो चयन गर्नु राम्रो हुन्छ । यदि धेरै भिडियो हेर्ने, गेम खेल्ने वा धेरै विन्डोहरु खोल्ने प्रयोगका कामहरुका लागि भने ठुलो स्क्रिन भएको स्मार्टफोन खरिद गर्नु राम्रो हुन्छ ।
४. डिस्प्लेको क्वालिटी
स्क्रिनको महत्व स्मार्टफोनमा महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसका साथै डिस्प्लेमा पनि निकै ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । डिस्प्ले कत्तिको उज्यालो छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । जसमा धेरै रङ्गहरु छुट्याउनु जरुरी हुन्छ । विशषगरी एलसीडीको तुलनामा एमोएलईडीको डिस्प्लेको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
५. क्यामेराको मेगापिक्सलमा ध्यान नदिने
स्मार्टफोनमा क्यामेराको कुरा गर्दा धेरैले कति मेगापिक्सलको हो भनी प्रश्न गर्ने गर्छन् । यद्यपि क्यामेरा भन्दा पनि अपर्चर तथा अन्य फिचर्सको आधारमा क्यामेराको गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ ।
६. ब्याट्रिको क्षमता
कुनै पनि स्मार्टफोन खरिद गर्दा एकपटक चार्ज गर्दा १० घण्टाभन्दा कम समय मात्र टिक्छ भने त्यस्तो स्मार्टफोन स्वीकार गर्नुहुँदैन । थोरै पैसामा ब्याट्रि राम्रो टिक्ने स्मार्टफोनहरु पाइन्छन् ।
स्टोरेजको विषयमा पनि स्मार्टफोन खरिद गर्दा स्टारेजको पनि ख्याल राख्नुपर्छ । कम्तीमा १६ जीबी भएको स्मार्टफोनको चयन गर्नुपर्छ । स्टोरेज केही कम छ भने एन्ड्रोइडमा माइक्रोएसडी कार्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ तर आईओएसमा भने यो सुविधा पनि उपलब्ध छैन । (एजेन्सी)